China nguSihlalo Umngundo mveliso kunye nabenzi | HEYA
Sihlalo Ukubumbela kubhekisa ekubumbeni okusetyenziselwa ukuvelisa uSihlalo weSikhunta ngomatshini wokubumba ngenaliti. Ngokweendlela ezahlukeneyo zemveliso, kukwakho nezinto zokubumba zesitulo ezixineneyo, ukusonga isitulo somenzi wenkunkuma, umngundo wesihlalo elwandle, njl.
I-Taizhou Heya Mold Co, Ltd njengenkampani yokuvelisa ukungunda, ibifunxa amava oontanga bayo ngelixa idibanisa iikhonsepthi zenkampani zabo ukuphucula ngokuqhubekayo umgangatho weSihlalo soMngundo.
Le nkampani ungenza ngokusesikweni nguSihlalo Ikubumbe kubathengi ngokweemfuno zabathengi kwaye zincediswe yi-CAD yobungcali / uyilo CAM / CAE, iziko processing khomputha CNC, iziko processing-high speed, CNC lathe, EDM, ucingo ukusika, umshini wokugaya kunye nezinye processing eliphezulu-ngqo izixhobo.
Ukwazisa iimfuno zakho zemveliso kunye nokuvunda kunye nolwazi oluneenkcukacha ngomatshini wokwenza inaliti yokubumba kuya kusinceda sikunike isicwangciso sokucaphula ngokukhawuleza.
Sijonge ukufikelela nzulu kunye nokusebenzisana ixesha elide kunye nawe.
Okulandelayo lulwazi oluphambili lwereferensi yakho:
Igama lemveliso Sihlalo Ukubumba
Ukubumba komngundo China elicwangcisiweyo ziphene zeplastiki ngumngundo
Umngundo Steel S45C, P20H, 718H, 2738, S136, H13 njl.
Imveliso yeMerial PP, PC, PS, PAG, POM, PE, DB, PVC, ABS, PMMA, njl
Base Umngundo LKM, ISM, HASCO, DME
Umhadi Isithuba esinye / esinee-Multi-cavity ngokweemfuno zabathengi
Ubomi besikhunta 300,000 ~ kwisigidi esinye sokudubula
Uhlobo lwembaleki Imbaleki ebandayo / eshushu
Uhlobo lweSango Isango lokukhomba, isango lenkwili, isango elisecaleni, njl
Ixesha lokuzisa Iintsuku ezingama-30 ~ 60
Ukupakisha Amatyala asemgangathweni eenkuni
Ezothutho Elwandle okanye ngomoya njengeemfuno zabaxumi
Rhweba ilizwe Ehlabathini lonke
Eyona Ikubumbe Ikubumbe kunye Ubulukhuni kuwe reference:
Ibakala lensimbi I-S50C P20 P20HH 718H 2738H H13 S136 NAK80
Q: Iphi inkampani yakho?
A: Heya zomngundo indawo e No.3, Houshi Road, kwisithili Huangyan, Taizhou komzi, Zhejiang, China mpumalanga. I-Thers imalunga nemizuzu engama-50 ukusuka eLuqiao Airport; Imizuzu engama-20 ukusuka Taizhou Railway Station. Siyakwamkela ngokufudumeleyo ukuba undwendwele inkampani yethu
Q: uya njani kumzi-mveliso wakho?
A: Unokuza kumzi-mveliso weHeya Mold ngenqwelomoya, ngololiwe nangebhasi.
Kukho malunga neeyure ezi-2 ngenqwelomoya ukusuka eGuangzhou ukuya kwisixeko saseTaizhou; Iiyure ezi-3 ngololiwe ohamba ngesantya esiphakamileyo ukusuka eShanghai ukuya kwisikhululo saseTaizhou; 1 iyure ngololiwe ukusuka eNingbo okanye eWenzhou ukuya kwisikhululo saseTaizhou. Iyure eyi-3 ngebhasi okanye ngololiwe ukusuka kwi-Yiwu ukuya kwisikhululo saseTaizhou.
Q: Loluphi uhlobo ulwazi imfuno iikowuteshini sokubumba?
A: Kuxhomekeke kwimveliso yakho, ke wamkelekile ukunxibelelana no-Heya Mold ukuze uyidibanise. Isizathu, kungcono ukuba unolu lwazi lungezantsi:
1, Isampulu yefoto enobungakanani okanye uyilo lwe-2D / 3D
2, ubungakanani beCavity
3, uhlobo Imbaleki, kuyabanda okanye kushushu
4, uhlobo lwesinyithi seMold, P20, 718, 2738, H13, S136,2316, njalo njalo.
5, Ipharamitha yomatshini wenaliti okanye ubungakanani beplate (umgama wentonga yomtya)
Egqithileyo USihlalo Inaliti zomngundo
Okulandelayo: Usihlalo weSikhunta
Isitulo esiQinisekisiweyo sePlastiki